လက်ကား MTP Multimode 50/125 OM3/OM4 Optic Patch Cord ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ | အမျှင်ဓာတ်
ဖိုက်ဘာမုဒ်- Multimode 50/125 OM3/OM4
ကေဘယ်အရောင်များ- လိမ္မော်ရောင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
MTP ကြိုးများကို ဒေတာစင်တာများကဲ့သို့ သိပ်သည်းဆမြင့်သော ကေဘယ်ကြိုးများ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ သမားရိုးကျ၊ တင်းကျပ်စွာခံနိုင်သော ဖိုင်ဘာအစုံအလင်ရှိသော ကေဘယ်ကြိုးတစ်ခုစီကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးမှ တစ်ဦးချင်းဖြတ်တောက်ရန် လိုအပ်သည်။ အမျှင်များစွာကိုသယ်ဆောင်သည့် MTP ကေဘယ်လ်သည် ကြိုတင်ပိတ်ထားသည်။ စက်ရုံမှရပ်စဲထားသော MTP ချိတ်ဆက်မှုများတွင် အများအားဖြင့် 8fiber၊ 12 fiber သို့မဟုတ် 24 fiber array ရှိသည်။
MTP သည် US Conec မှထုတ်လုပ်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် MPO သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။ MTP သည် “Multi-fiber Termination Push-on” connector ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ MTP connectors များသည် မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် optical specs များအတွက် အင်ဂျင်နီယာချုပ်ထားပါသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်အချို့ကို မူပိုင်ခွင့်များဖြင့် အကျုံးဝင်ပါသည်။ သာမန်မျက်စိဖြင့်၊ connector နှစ်ခုကြားတွင် ကွာခြားချက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ကေဘယ်ကြိုးတွေမှာ အချင်းချင်း လိုက်ဖက်ပါတယ်။
MTP ချိတ်ဆက်ကိရိယာသည် အမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသမီး ဖြစ်နိုင်သည်။ ferrule ၏အဆုံးမှအပြူးထွက်နေသော alignment pin နှစ်ခုဖြင့် အထီး connector ကို သင်ပြောပြနိုင်ပါသည်။ MTP အမျိုးသမီးအချိတ်အဆက်များသည် အမျိုးသားချိတ်ဆက်ကိရိယာမှ ချိန်ညှိထားသော ပင်နံပါတ်များကို လက်ခံရန် ferrule တွင် အပေါက်များပါရှိသည်။
MTP Multimode 8 Fibers OM3/OM4 50/125μm Fiber Optic Patch Cord သည် အချိန်ကုန်သက်သာသော နယ်ပယ်ပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အစားထိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး နေရာချွေတာရန်နှင့် ကေဘယ်လ်စီမံခန့်ခွဲမှုပြဿနာများကို လျှော့ချရန်လိုအပ်သည့် ဒေတာစင်တာများရှိ သိပ်သည်းဆမြင့်ဖိုက်ဘာဖာထေးမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ MTP ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် Corning fiber သို့မဟုတ် YOFC ဖိုက်ဘာဖြင့် ၎င်းကို 10/40/100G မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆဒေတာစင်တာအက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။
ချိတ်ဆက်ကိရိယာ MTP မှ MTP/LC/SC/FC/ST ဖိုက်ဘာအရေအတွက် ၈၊ ၁၂၊ ၂၄
ဖိုက်ဘာမုဒ် OM3/OM4 50/125μm လှိုင်းအလျား 850/1300nm
ပင်စည်အချင်း 3.0mm ပိုလန်အမျိုးအစား UPC သို့မဟုတ် PC
ကျား/မ ပင်နံပါတ် အမျိုးအစား အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် ယောကျာ်းလေး Polarity အမျိုးအစား Type A ၊ Type B ၊ Type C
ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု ≤0.35dB အရှုံးပြန်ပေး ≥30dB
ကြိုးအင်္ကျီ LSZH၊ PVC (OFNR)၊ စုံညီ (OFNP) ကြိုးအရောင် လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါရောင်၊ Aqua၊ ခရမ်းရောင်၊ ခရမ်းရောင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဖိုက်ဘာအရေအတွက် 8Fiber/12Fiber/24Fiber/36Fiber/48Fiber/72Fiber/96Fiber/144Fiber သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော
● MTP စတိုင်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် OM3/OM4 50/125μm Multimode ကြိုးများကို အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်
● Type A၊ Type B နှင့် Type C Polarity ရွေးစရာများ ရနိုင်ပါသည်။
● ကေဘယ်တစ်ခုစီသည် ထည့်သွင်းမှုနည်းပါးပြီး ပြန်ကျခြင်းအတွက် 100% စမ်းသပ်ထားသည်။
● စိတ်ကြိုက်အတိုအရှည်များနှင့် ကေဘယ်အရောင်များ ရနိုင်ပါသည်။
● OFNR (PVC)၊ Plenum(OFNP) နှင့် မီးခိုးနည်း၊ Zero Halogen(LSZH)
● ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုကို 50% အထိ လျှော့ချပေးသည်
● တာရှည်ခံမှု မြင့်မားခြင်း။
● မြင့်မားသော အပူချိန် တည်ငြိမ်မှု
● High Density ဒီဇိုင်းသည် တပ်ဆင်စရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။
● 40Gig QSFP စနစ်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
Jumper cable များကို patch panels များမှ transceivers များဆီသို့ နောက်ဆုံးချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား သီးခြားလွတ်လပ်သော backbone links နှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် centralized cross connect တွင်အသုံးပြုသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံသည် အမှတ်စဉ် သို့မဟုတ် မျဉ်းပြိုင်ရှိမရှိအပေါ် မူတည်၍ Jumper ကြိုးများကို LC ချိတ်ဆက်မှုများ သို့မဟုတ် MTP ချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ jumper cable များသည် တူညီသော rack အတွင်း စက်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုသာ ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် အတိုအရှည် စည်းဝေးပွဲများဖြစ်သော်လည်း၊ အချို့ကိစ္စများတွင် jumper cable များသည် "middle of row" သို့မဟုတ် "end of row" distribution architectures ကဲ့သို့ ပိုရှည်နိုင်သည်။
RAISEFIBER သည် "in-rack" ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော jumper cable များကိုထုတ်လုပ်သည်။ Jumper ကြိုးများသည် သမားရိုးကျ စည်းဝေးပွဲများထက် သေးငယ်ပြီး လိုက်လျောညီထွေရှိကာ ချိတ်ဆက်မှုအား အမြင့်ဆုံးထုပ်ပိုးမှုသိပ်သည်းမှုနှင့် လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ဝင်ရောက်နိုင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ jumper ကေဘယ်များအားလုံးတွင် တင်းကျပ်စွာ ကွေးညွှတ်နေသောအခြေအနေများအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကွေးညွှတ်ပြုပြင်ထားသော ဖိုက်ဘာများပါ၀င်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို အခြေခံအမျိုးအစားနှင့် ဖိုက်ဘာအမျိုးအစားအပေါ်အခြေခံ၍ အရောင်ကုဒ်နံပါတ်သတ်မှတ်ထားသည်။
• ဖိုက်ဘာအရေအတွက်အားဖြင့် ရောင်စုံကုဒ်တပ်ထားသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာ boots
• ပြုပြင်ထားသော ဖိုက်ဘာနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် တည်ဆောက်မှုတို့ကို ကွေးညွှတ်ပါ။
• Base-8၊ -12 သို့မဟုတ် Base-24 အမျိုးအစားများအဖြစ် ရနိုင်သည်။
MTP Connector အမျိုးအစား
MTP® ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အရောင်ရွေးချယ်မှုများ
USCONEC MTP® အရောင်
SM စံနှုန်း အစိမ်းရောင်
SM ELITE မုန်ညင်း
OM4 ERICA VIOLET သို့မဟုတ် AQUA
MTP မှ MTP Multimode 12 Fibers OM3/OM4 Fiber Optic Patch Cord
MTP မှ MTP Multimode 24 Fibers OM3/OM4 Fiber Optic Patch Cord
MTP မှ MTP 12 Fibers Multimode OM3 Fiber Optic Patch Cord အား တွန်း/ဆွဲ တက်ဘ်များဖြင့်
MTP မှ 6x LC Duplex 12 Fibers Multimode OM3/OM4 Breakout Fiber Optic Patch Cord
MTP မှ MTP Multimode 8 Fibers OM3/OM4 Fiber Optic Patch Cord
MTP မှ MTP 12 Fibers Multimode OM4 Fiber Optic Patch Cord အား တွန်း/ဆွဲ တက်ဘ်များဖြင့်
ဤ polarity တွင်၊ fiber 1 (အပြာ) ကို connector တစ်ခုစီရှိ hole 1 တွင် အဆုံးသတ်ပါသည်။ ဤ polarity ကို STRAIGHT THROUGH ဟု မကြာခဏ ရည်ညွှန်းသည်။
ဤဝင်ရိုးစွန်းတွင်၊ အမျှင်များသည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ ဖိုက်ဘာနံပါတ် 1 (အပြာ) ကို 1 နှင့် 12 တွင် အဆုံးသတ်သည်၊ ဖိုက်ဘာနံပါတ်2ကို2နှင့် 11 တွင် အဆုံးသတ်သည်။ ဤ polarity ကို CROSSOVER ဟု မကြာခဏရည်ညွှန်းပြီး 40G အက်ပ်များတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို နောက်အပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း type B မိတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အသုံးများသည်။
ဤဝင်ရိုးစွန်းတွင်၊ အမျှင်များကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားသောအတွဲ ၆ တွဲအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ ၎င်းတို့ကို ဖောက်ခွဲများ (ကေဘယ်လ်များ သို့မဟုတ် မော်ဂျူးများ) တစ်ဦးချင်း 2-ဖိုက်ဘာချန်နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မည့် prefab cabling စနစ်များနှင့် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
MTP အမျိုးအစား A Mating Adapters များသည် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို ဦးတည်ချက်တစ်ခုတွင် ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခု၏သော့နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ KEYUP TO KEYDOWN ဟုခေါ်သော ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်တွင် အခြားတစ်ခု၏သော့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤသော့ ချိန်ညှိမှုသည် ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခု၏ ပင်နံပါတ် 1 ကို အခြားချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခုစီ၏ ပင်နံပါတ် 1 နှင့် ချိန်ညှိထားပြီး ဖိုက်ဘာတစ်ခုစီအတွက် တည့်တည့်ချိတ်ဆက်မှုပေးစွမ်းသည်- ဥပမာ- အပြာမှအပြာ၊ လိမ္မော်မှ လိမ္မော်ရောင်၊ aqua သို့ aqua သို့သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် တည့်တည့်ချိတ်ဆက်မှုပေးစွမ်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် ဖိုက်ဘာအရောင်ကုဒ်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
MTP Type B Mating Adapters များသည် connector နှစ်ခုကို သော့ သို့မဟုတ် KEYUP သို့ KEYUP သို့ ချိန်ညှိပြီး Type B ကေဘယ်ကြိုးတွင် ဖြစ်ပျက်ပုံနှင့် ဆင်တူသော ဖိုက်ဘာများ၏ အရောင်ကုဒ်များကို လဲလှယ်ပါ။ 40G transceiver အတွက် ဖိုင်ဘာများကို ချိန်ညှိရန်အတွက် ဖိုက်ဘာများ လဲလှယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
1. ဘာကြောင့် RAISEFIBER ကို ရွေးချယ်တာလဲ။
(1) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ- MOQ နည်းပါးသော၊ အခမဲ့နမူနာများရရှိနိုင်သည်။
(2) အရည်အသွေးအာမခံချက်- တည်ငြိမ်မြင့်မားသောအရည်အသွေး။
(3) ဖောက်သည်များဖြေရှင်းချက်- အမြန်။
(4) Win-Win စျေးနှုန်း- ကုန်ကျစရိတ်များစွာကို သက်သာစေပြီး သုံးစွဲသူများအတွက် ပိုမိုအကျိုးခံစားခွင့်များ ဆောင်ကြဉ်းပေးသည်။
2. သင် OEM၊ ODM ကိုလက်ခံပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ သူတို့ကို လက်ခံပါတယ်။
3. ကျွန်ုပ်တို့၏ LOGO ကို သင် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်လိုဂိုကို သေတ္တာများ၊ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များတွင် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။
4. ဤထုတ်ကုန်အတွက် နမူနာမှာယူမှုတစ်ခု ရနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်ရန်နှင့် စစ်ဆေးရန် နမူနာမှာယူမှုကို ကြိုဆိုပါသည်။ ရောနှောထားသော နမူနာများကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
နမူနာ 1-2 ရက်လိုအပ်သည်၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် 3-5 ရက်လိုအပ်သည်။
6. ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်မည်ကဲ့သို့ ပို့ဆောင်ပြီး ရောက်ရှိလာရန် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အများအားဖြင့် DHL၊ UPS၊ FedEx သို့မဟုတ် TNT ဖြင့် တင်ပို့သည်။ ရောက်ရန် ၃-၅ ရက်ကြာတတ်သည်။ လေကြောင်းလိုင်းနှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။
7. သင်သည် ထုတ်ကုန်များအတွက် အာမခံချက်ပေးပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ထုတ်ကုန်များကို 10 နှစ်အာမခံပေးပါသည်။
1) နမူနာများ: 1-2 ရက်။
2) ကုန်ပစ္စည်း: ပုံမှန်အားဖြင့် 3-5 ရက်။
ယခင်- MPO မှ MPO 12Fiber Multimode OM4 50/125 Ribbon Fiber Optical Patch Cord
နောက်တစ်ခု: MTP Multimode 50/125 OM5 Optic Patch Cord
MTP မှ 4x LC/UPC Duplex 8 Fibers Single Mode 9/...
MPO မှ MPO 12Fiber Multimode OM4 50/125 Ribbon...
MTP မှ 2x 12 Fibers MTP 24 Fibers Multimode OM4...